China Slag vetikal na nkume igwe nri na ngwaahịa | BBMG
Ala slag site na igwe na-egweri ihe na-egweri diski nwere akụkụ abụọ: obere akụkụ nke slag ọhụrụ nwere nnukwu mmiri na ọtụtụ ala slag na-emechabeghị na mmiri dị ala. Nke a na akụkụ nke na-abụghị okokụre slag bụ keadighi rarii ihe laghachiri mgbe nkewa site separator n'ihi na nke ibu ahụ. Ifufe siri ike na-eme ka akụkụ abụọ nke slag daa na diski.
N'okpuru ihe nke ike nke centrifugal, a na-eduzi slag ahụ na-enyere ndị na-egwu egwu aka, na slag na-eme ka ọ gbasaa site na ibelata ịfụ nke inyeaka na-egwu ala. The inyeaka egweri ala na-eme ka a ụfọdụ anya si egweri diski, na-ofu na rocker ogwe aka na nnọọ ìhè arọ.
The isi egweri ala na-ofu na thicker isi rocker ogwe aka, na ahazi ihe oyi akwa bụ ala site mgbali egweri. A na - enweta ike site na ịdị arọ nke igwe na-egweri onwe ya na nrụgide nke usoro hydraulic.
Igwe na-egweri ihe na-agbagharị site na ịmịkọta ihe ndina abrasive. Ihe mmetụta na ihe nkwụsịtụ nke arụnyere na ogwe aka rocker nwere ike igbochi kọntaktị kpọmkwem kọntaktị n'etiti igwe na-egweri na diski egweri.
A na-atụfu mkpụrụ akụkụ slag site na ike centrifugal ma na-asọgharị site na mgbanaka ejidere. N'ebe a ka ikuku ikuku na-ebili site na mgbanaka ikuku, na uzuzu na gas na-aga site na ime ụlọ na-egweri, nke mere na cylinder na-egweri ya na-eji akwa mkpuchi na-eguzogide ma banye na separator. A na-etinye ma ọ bụ welded separator powder na gbọmgbọm gbọmgbọm kwụ ọtọ.
Na-enweghị enyemaka nke nnyefe inyeaka, a na-ebugharị igwe kwụ ọtọ ma malite site na isi moto n'okpuru ọnọdụ nke itinye (mgbe obere nkwụsị). Iji wepu isi moto, na-egweri ala na-hydraulically weliri iji belata nrụgide nke haịdrọlik usoro. Enwere ike iwebata mmanụ ahụ n'ime oghere na-enweghị rodụ nke haịdrọlik.
GRINDING Disc Diama
φ4.6 90 4600 0 ~ 90 MJP3030 37.7328 YRKK800-6 3000
Nke gara aga: Egweri ala
Osote: Kol na nkume igwe nri